I-acid-base ityuwa yokuGqithisela abaThumeli abavelisi kunye nabaxhasi - China iAcid-base ityiwa yoxinaniso yoTshintsho lweFektri
Isilumko sokuSebenza ngokuSebenza kwe-CS3790
Inzwa yokuhambisa engenakubumba ivelise okwangoku kwilogo evaliweyo yesisombululo, kwaye emva koko ilinganise okwangoku ukulinganisa ukuqhutywa kwesisombululo. Isenzi sensor sokuqhuba siqhuba i-coil A, ebangela ukuba kutshintshiswane ngoku kwisisombululo; Ikhoyili B ibhaqa okwangoku, okuhambelana nokuqhutywa kwesisombululo. Isenzi sensor sokuqhuba senza lo mqondiso kwaye sibonisa ukufundwa okungqinelanayo.
I-on-line ye-Acid, iAlkali kunye neTyuwa yoxinaniso seMitha yokuSebenza kweGesi yokuDlulisa iT6038
Imveliso ye-on-line yokujonga umgangatho wamanzi kunye nesixhobo sokulawula nge-microprocessor. Isixhobo sisetyenziswa ngokubanzi kumandla ashushu, ishishini leekhemikhali, i-pickling yensimbi kunye namanye amashishini, njengokuhlaziya i-ion exchange resin kwisityalo samandla, inkqubo yecandelo leekhemikhali, njl njl. isisombululo.
Imitha ye-Acid kunye neAlkali yeTyuwa yokuGcina iMeter T6036
Imitha yokuqhutywa kwe-Intanethi kwimizi-mveliso yimicroprocessor esekwe kumgangatho wamanzi isixhobo sokujonga esweni, amanyathelo e-salinometer kunye nokubeka iliso kwityuwa (umxholo wetyuwa) ngomlinganiso wokuqhutywa kwamanzi amatsha. Ixabiso elilinganisiweyo liboniswa njengepesenti kwaye ngokuthelekisa ixabiso elilinganisiweyo kumsebenzisi ochaziweyo wexabiso leseti ye-alamu, iziphumo zokudlulisa ziyafumaneka ukubonisa ukuba ityuwa ingaphezulu okanye ingezantsi kwexabiso leseti yealam.
Ph woluvo Electrode, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Isilumko seChlorophyll, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Isilumko sokuSebenza kweTitanium,